Semalt: သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များပရိသတ်ကိုကြီးထွားစေရန်အံ့သြဖွယ်နည်းလမ်းများ
၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးစီမံချက်တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတိုးချဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏စီးပွားရေးကိုအခွင့်အလမ်းအသစ်များအတွက်ဖွင့်ပေးသည်။ သင်ပြင်ဆင်ပေးထားသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန်ပရိသတ်မရှိလျှင်ဤအရာအားလုံးသည်အရေးမကြီးပါ။ ထို့ကြောင့်ပရိသတ်တစ်ခုရှိရုံသာမကသင်၏ပရိသတ်ကြီးထွားလာရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်ကြည့်ရှုသူများနှင့်အတူသင်၏စီးပွားရေးအတွက်အင်တာနက်ကပေးသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်ခံစားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ပစ်မှတ်ထားပရိသတ်ကိုရယူပြီးတော့သူတို့ကိုကြီးထွားရန်မလွယ်ကူပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာဖြင့်အွန်လိုင်းမှတဆင့်လူတိုင်းသည်သင်၏ပရိသတ်ကိုဖွဲ့စည်းထားသောကြည့်ရှုသူများ၏မျှတသောဝေစုကိုယူထားပုံရသည်။ သို့သော်ဤအရာသည်မမှန်ပါ။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အသစ်အနေဖြင့်သင်အကူအညီမပါဘဲအခွင့်အရေးလုံးဝနီးပါးမရပါ။ အားလုံးမှတဆင့် အဆိုပါ Semalt က်ဘ်ဆိုက်သင်၏ပရိသတ်တိုးတက်မှုနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည့်သင်၏ SEO တိုးတက်အောင်နည်းလမ်းများသင်ရှာသည်။
သင်၏ဝဘ်ဆိုက်အသွားအလာသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မည်မျှကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေကြောင်းနှင့်စီးပွားရေးမောင်းနှင်မှု၏အရေးကြီးသောညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုးပွားလာသောပရိသတ်နှင့်အတူသင်လုပ်နိုင်သည်
၀ ယ်ယူသူများပိုမိုရရှိရန်အတွက်ပိုမိုသော ဦး ဆောင်မှုကိုထုတ်ယူခြင်းနှင့်သင်၏စကားဝိုင်းများကိုတိုးချဲ့ခြင်း။
သို့သော်၊ ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရန်အတွက်သင်သည်မည်သည့်ပရိသတ်/အသွားအလာမျှမလိုအပ်ပါ။ သင့်တော်တဲ့အသွားအလာ၊ သင့်ပစ်မှတ်ထားတဲ့ပရိသတ်ရှိရင်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဤသူတို့သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောကြည့်ရှုသူများဖြစ်သည်။
သင်ထည့်နိုင်သည့် tool သို့မဟုတ် extension မရှိပါ။ သင်၏ site သို့ traffic ပိုမြန်လာစေပါသည်။ အဲဒီအစား၊ သင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအရည်အသွေးမြင့်အသွားအလာကိုပေါင်းစပ်ပေးတဲ့လိုင်းများစွာရှိခဲ့ရင်ကူညီလိမ့်မယ်။ ဤကွဲပြားခြားနားသောလိုင်းများကိုအသုံးပြုသောအခါအားစိုက်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ အခြားသူများနှင့်သင်အချိန်လိုအပ်သည်၊ အချို့သည်ငွေလိုသည်။ သင့်ဝဘ်ဆိုက်ပရိသတ်တိုးပွားနိုင်မည့်နည်းလမ်းအချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်
၁။ ကျွန်ုပ်၏ google စီးပွားရေးစာရင်းကိုအခမဲ့ဖန်တီးပါ
အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက်၎င်းသည်သင်၏ပရိသတ်ကိုတိုးတက်စေရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မင်းသိလား ပိုကောင်းတဲ့ Google My Business စာရင်းဟာမပြည့်စုံတဲ့ပရိုဖိုင်းထက် ၇ ဆပိုပြီးလည်ပတ်မှုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကို? သင်၏ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့လင့်ခ်များကိုစာရင်းပြုစုထားသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပိုမိုသွားလာရန်အံ့သြဖွယ်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Google ကပိုမိုထိရောက်သောရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုပေးရန်ကြိုးစားနေသည်ကိုသတိရပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏စာရင်းသည်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါကအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များသည်သူတို့လိုအပ်တာကိုရှာဖွေပြီးသင်၏စီးပွားရေးကိုတိုက်ရိုက်လည်ပတ်နိုင်သည်။
၂။ SERP အတွက်သင့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်
ဤသည်သည်စွယ်စုံသုံးနိုင်သော်လည်းသင်၏ပရိသတ်ကိုတိုးတက်စေရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် SERP တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သော SEO နည်းဗျူဟာမြောက်များစွာရှိသည်။ ပိုကောင်းတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပရိသတ်ကိုပိုမိုဆိုလိုသည်။ သင်၏ SEO တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းအချို့မှာ -
သင်၏စာမျက်နှာများအတွက်တိကျသောနှင့်သိကောင်းစရာများသော metadata ဖော်ပြချက်များရေးသားခြင်း။
၎င်းတို့သည် SEO ၏အစိတ်အပိုင်းများစွာ၏မျက်နှာပြင်ကိုသာဖော်ပြသည်။
နောက်ကျောလင့်တစ်ခုသည်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော link တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုအခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဆီကနေလွှဲပြောင်းပေးတဲ့အရာအဖြစ်မှတ်ယူပါ။ အခုဆိုရင်ဂူဂဲလ်လိုနာမည်ကြီးဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုမင်းရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါ။ ဆိုလိုသည်မှာဂူဂဲလ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဝင်၍ သင်၏ link ကိုနှိပ်သူသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့အလိုအလျောက်ရောက်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်၏စီးပွားရေးကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပရိသတ်တစ်ခု၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်တင်ရုံသာမကသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ပိုမိုအရည်အချင်းပြည့်မီသောလမ်းကြောင်းကိုပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။ Google သည်သက်ကြီးရွယ်အိုများအားပိုမိုသောအခွင့်အာဏာရှိခြင်းနှင့်ပိုမိုအာရုံစိုက်စေသည်၊ ထို့ကြောင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုသည်ထိုကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်မှအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုရယူသောအခါသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပိုမိုသောအခွင့်အာဏာပေးသည်။ ဂူးဂဲလ်မှပိုမိုယုံကြည်မှုသည်သင်၏အဆင့်မြင့်သောအဆင့်သို့ ဦး တည်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏လမ်းကြောင်းကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။
လူမှုမီဒီယာသည်ယနေ့လူအများအပြားတွင်တွေ့နိုင်သောလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အခမဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏လမ်းကြောင်းကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ Facebook, Instagram နှင့် Linkedln ကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်၏ထုတ်ကုန်များ၊ ဘလော့ဂ်ပို့စ်များနှင့်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာများကိုပိုမိုဖော်ရွေသောဝန်းကျင်တွင်မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်၏ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏မီးပွိုင့်ဖြစ်လာသည်။
သင်၏ပထမဆုံးစာမျက်နှာသည်စာဖတ်သူများအားသင်၏ပထမဆုံး site အတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များကိုသင်သိသည်။ သင်၏စာမျက်နှာသည်စာဖတ်သူများအားသင်၏ site ကိုပထမဆုံးထင်မြင်စေခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သင်၏လမ်းကြောင်းကိုတည်ဆောက်ရန်နောက်တစ်နည်းဖြစ်သည်။ ကမ်းတက်စာမျက်နှာများတွင်သင်၏စာဖတ်သူများသည်သူတို့၏စိတ်ကိုထွင်ပြီးသင့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။ landing စာမျက်နှာများသည်အလွန်တိကျသောကြောင့်သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျတွင်အလွန်ပစ်မှတ်ထားခံရနိုင်ပြီးကြည့်ရှုသူများအားသူတို့သိမ်းထားရန်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးနိုင်ပါသည်။ နိမ့်ဆင်းသက်သောစာမျက်နှာတစ်ခုဖြင့်သင်သည်သင်၏ visitors ည့်သည်များကိုဝေးဝေးသို့လွှတ်လိုက်သည်။
ပုံမှန်သတင်းလွှာများနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကမ်းလှမ်းချက်များကိုအီးမေးလ်များဖြင့်ပေးပို့ခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်အဆက်အသွယ် လုပ်၍ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့အသွားအလာအသစ်များရနိုင်သည်။ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုပရိသတ်တစ်မျိုးတည်းကို ပစ်မှတ်ထား၍ အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်စာမျက်နှာများအတွက်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်စာမျက်နှာများကိုလင့်ခ်လုပ်ပေးသည်။ ဤနည်းလမ်းကိုသင်အသုံးပြုပါက၎င်းတို့ထံသို့သင်ပေးပို့လိုက်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်ကြိမ်နှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတိထားသင့်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာသင့်ရဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အချိန်တိုင်းတွင်အသုံးဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုပို့ချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် မည်သူမျှသူတို့၏စာများကိုကြော်ငြာများဖြင့်ပြည့်စေလိုသည်။
ဂူဂဲလ် Analytics သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာကိုတိုးတက်စေနိုင်သည့်အရာများကိုအသုံးဝင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးနိုင်သည်။ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက်ခြေရာခံလင့်ခ်များကိုအသုံးပြုပါကသူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတိုးတက်မှုကိုလည်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။ သင်၏သရုပ်ခွဲဆန်းစစ်မှုကပေးသောအချက်အလက်များကိုနားလည်ခြင်းအားဖြင့်၊ မည်သည့်နည်းဗျူဟာသို့မဟုတ်အမျိုးအစားကိုသင်၏ပရိသတ်အတွက်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီတိုးတက်ရန်လိုအပ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
သင်ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို SERP ၏ပထမစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြနိုင်သည်။ များစွာသောဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ အထူးသဖြင့်အသစ်များသည်ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုကြသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုရှာဖွေပြီးသည်နှင့်၎င်းကြော်ငြာကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်ပထမဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်အဖြစ်အလိုအလျောက်ဖော်ပြသည်။ ဒီထိတွေ့မှုအမျိုးအစားဟာသင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုပိုမိုအသွားအလာများစေတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောပုံစံသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များအတွက်ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုနှိပ်လိုက်သည့်အကြိမ်အရေအတွက်ကိုလည်းသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့်လူတိုင်းအိမ်ပြန်ကြသည်။
အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအောင်မြင်မှုအတွက်မှော်အတတ်မရှိ။ အချို့ကသင့်ကိုပြောကောင်းပြောပေမည်၊ ဤအကြောင်းကြောင့်သင်သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်အတွက်မည်သည့်အရာကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုသိရှိရန်ကွဲပြားခြားနားသောအရာများကိုစမ်းသပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ပြောကြားခြင်းသည်ပရိသတ်များအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှဆွဲဆောင်နိုင်စေရန်သင်၏ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများ၏အရှည်နှင့်ပုံစံများအမျိုးမျိုးရှိရန်လိုအပ်သည်။
စာဖတ်သူများရှိနိုင်သည့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရာတွင်သင်၏ခေါင်းစဉ်သည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်မည်သို့ငါးမျှားရမည်ကိုရှာဖွေပြီးခေါင်းစဉ်နှစ်ခုကွဲပြားသည်ကိုတွေ့ရှိပါကပထမမှာငါးရှာခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ဖြစ်သည်၊ ဒုတိယမှာရေထဲချိတ်ဆွဲထားသည်ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကသင်လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပါနေတယ်ဆိုတာပြတယ်။ ခိုင်မာသောခေါင်းစဉ်မရှိပါကအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာများကိုပင်ဘယ်သောအခါမျှတွေ့မြင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အဆင့်သတ်မှတ်ရန်အတွက်သင်သည်ရှည်လျားသောသော့ချက်စာလုံးများကိုအဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်လိုအပ်သည်။ အမြီးရှည်သော့ချက်စာလုံးများသည်ဝက်ဘ်ရှာဖွေမှုအများစုကိုပြုလုပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းတို့ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးမပြုပါကသင်အသွားအလာကိုစားပွဲပေါ်ချန်ထားသည်။
သင်၏အကြောင်းအရာကို LinkedIn တွင်တင်ပါ
LinkedIn ဟာပုံမှန်ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားသည်။ ၎င်းသည်သူငယ်ချင်းသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်နေရာတစ်ခုထက်လုပ်ငန်းခွင်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်အနေဖြင့် LinkedIn သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အတွက်အမြတ်အစွန်းများသောထုတ်ဝေရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သင်၏ဝဘ်ဆိုက်များကိုပုံမှန်တင်သင့်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင့်အားယာဉ်ကြောမှုပိုများစေပြီးသင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့်အခွင့်အာဏာကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။
13. Schema Microdata ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ
ဤသည်သေချာပေါက်သင့် site ကိုမှလာမယ့်အသွားအလာပမာဏတိုးမြှင့်မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအစား၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စက်များသည်သင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ Schema Microdata ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သော site အတိုအထွာများကိုပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ click-through နှုန်းကိုတိုးတက်စေသည်။
ယခုဤနည်းလမ်းများသည်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့အသွားအလာပိုမိုများပြားလာရန်သို့မဟုတ်ပရိသတ်များရရှိရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းများဖြစ်သော်လည်း၎င်းမှာရပ်တန့်မသွားပါ။ ဤအကြံပြုချက်များဖြင့်သင်သည်သင်၏ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်ရုံသာမကသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိ visitors ည့်သည်အရေအတွက်ကိုလည်းတိုးပွားစေပြီး၎င်းတို့အားစေ့စပ်သေချာစေပါလိမ့်မည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေး/SEO ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများသည်သင်၏ဂူဂဲလ်၏တည်ရှိမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်သင်တွေ့ရှိရန်နှင့်ပရိသတ်ကိုရောက်ရှိရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အကြံပြုချက်များကိုပေးရန်။